Semalt Expert: Famerenana maimaim-poana
Ny atidohan'olombelona dia fantatra amin'ny fanaovana haingana kokoa ny grafika raha oharina amin'ny soratra tsotra. Izany dia manazava ny antony mahatonga ny votoaty amin'ny sary na ny infographics ho 94 isan-jato ny fomba fijery raha ampitahaina amin'ny votoaty amin'ny lahatsoratra tsotra. Ny fampiasana sary mifanaraka amin'ny votoatinao dia manintona ny mpamaky ary manampy amin'ny fivarotana ny vokatrao. Ny tena zava-dehibe dia manatsara ny traikefan'ny mpampiasa izay manakiana ny SEO ny sary. Ankehitriny fantatrao fa singa manan-danja toy izany ny sary ao amin'ny tranokalanao, zava-dehibe ny hahalalany ny ankamaroan'izy ireo - blue book value tractor trailers.
Ireto misy toro-hevitra valo avy amin'i Lisa Mitchell, mpitarika ny Success Manager Semalt , momba ny fomba hanatsarana ny sary mba hahazoana tsaratsara kokoa:
1. Fantaro sy ampiasao ny sary tsara
Ny sary dia manambara tantara iray, vokatr'izany dia zava-dehibe ny hahazoana antoka fa ireo sary izay ampiasainao dia manan-danja amin'ny loha-hevitra atolotra. Rehefa mampiditra sary tsy misy ifandraisany amin'ny votoatiny manodidina ianao dia mandefa famantarana maromaro ho an'ny mpitsidika. Koa satria ny grafika dia natao hanampiana ny fanatsarana ny isa misy anao, raha toa ka tsy manan-danja amin'ny lohahevitra izy ireo dia very ny tanjona SEO.
Rehefa mitady sary mifanaraka amin'izany ianao dia manana safidy maro. Anisan'izany ireto:
Sary nalaina: Ireo dia sary nalainao tamin'ny fampiasana smartphone na fakantsary.
Sary nalaina: Azonao atao ny maka sary sary avy amin'ny vohikala momba ny lisansa CCO, anisan'izany ny Unplash and Pixabay. Azonao atao koa ny manoratra momba ny tolotra omena amin'ny toerana iray sy ny hafa, anisan'izany i iStock and Shutterstock.
Sary amin'ny sary (GIF) sary: ​​ Ireo dia sary ampiasaina ao anaty clips izay mampihetsi-po lalina izay mampiditra ny halaliny sy ny fahalianana amin'ny votoatinao. Afaka mahazo GIFs amin'ny GIPGY ianao na mamorona ny anao amin'ny fampiharana azy. Azonao atao koa ny mijery ny GIFMaker na ScreentoGIF.
Fanamboarana fitaovana: Ireo tranonkala toy ny PicMonkey sy Canvas dia loharano tena tsara ho an'ny famoronana ny endriny manokana.
2. Ampidino ny teny fanalahidy amin'ny anaran'ny grafika
Raha tsara amin'ny zavatra ataony ny motera fikarohana , dia tsy afaka mahita sary izy ireo ary mila teny manoritsoritra mba hilaza amin'izy ireo ny sary ao anatiny. Satria ny tranonkala sary, sary sy loharanom-tsary hafa dia mametraka ny mari-pamantarana filamatra ho an'ny sary izay tsy manampy ireo fitaovan'ny fikarohana mba hahatakarana ny sary, dia zava-dehibe ny manonona ny sary izay tianao hampidirina ao amin'ny tranokalanao.
Ny anaran'ny anarana namerina dia milaza ny motera fikarohana izay momba ny sary rehetra ary koa manome anao fahafahana hampiasa teny manan-danja azonao atao.
3..Lahatsoratra na lahatsoratra na Alt
Teny hafa izay fantatra amin'ny alàlan'ny soratrao Alt dia singa iray ao amin'ny tranonkalanao izay mandeha lavitra kokoa fa tsy manatsara fotsiny ny anaran-drakitra. Ny singa dia ahafahanao mamaritra ny lohahevitra ary ataovy ny sary mifandraika amin'ny pejy. Io endri-javatra io dia ampiasain'ny milina fikarohana mba hamantarana ny fifandraisana misy eo amin'ny tahiry sy ny votoatiny. Manampy azy ireo koa ny mahafantatra hoe iza amin'ireo sary no mety indrindra amin'ny fanomezana valiny amin'ny fikarohana.
4. Ampiasao araka ny tokony ho izy ny anarana
Ny manan-danja dia manan-danja rehefa manampy izy ireo hampiditra hevitra mifandraika amin'ny andininy mifanaraka aminy. Amin'ny ankapobeny, ny olona dia mamaky ny lohateny rehefa scan amin'ny alalan'ny pejy. Amin'ny ankapobeny, ny lohateny dia vakina 300 avo kokoa raha oharina amin'ny dika mitovy. Na dia izany aza dia tsy ilaina ny mampiditra an-tsoratra amin'ny sary rehetra raha mbola mamaritra azy ny lahatsoratra manodidina.
5. Ampiasao ny karazana tahiry mety
Na dia misy karazan-drakitra maromaro ampiasaina aza dia misy karazany roa ny Portable Network Graphics (PNG) sy ny Joint Photographic Experts Group (JPEG). Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny PNG, JPEGs, ary GIFs dia ny habeny sy ny kalitaony. Ny lanjany lehibe dia manan-danja ho an'ny SEO satria misy fiantraikany amin'ny fotoana entin'ny pejy.
6. Ampidino ny haben'ny rakitra tahiry
Koa satria ny haben'ny sary lehibe dia misy fiantraikany eo amin'ny pejy isaky ny pejy, mila mampihena azy ianao rehefa ilaina izany. Tsy vitan'ny manatsara ny vanin-drakitry ny pejy fa koa ny fitehirizana ny fandrindrana sy ny fitehirizana ao amin'ny server. Azonao atao ny mampihena ny fampiasana ny rindrankajy ampiasaina amin'ny alalan'ny fitaovana an-tserasera na misafidy amin'ny fitaovana an-tserasera toy ny CompressJPEG, TinyPNG ary Image Optimizer.
7. Amboary ny sary nataonao
Amin'ny toe-javatra sasany dia mety tsy ho ampy ny fampihenana ny rakitra an-tsoratra, ary mety tsy maintsy hampiova azy ireo ianao. Ny famaritana sary dia mampihena ny habe sy ny haavon'ny sary ary mampihena ny haben'io rakitra io mba hanatsarana ny vanin-drakitry ny pejy. Ataovy ao an-tsaina fa miharatsy ny sary sasany tahaka ny PGN rehefa manitsy azy.
8. Mamorona sitemaps ho an'ny sary
Ny sitemap dia manome milina fikarohana miaraka amin'ny fampahalalana fanampiny momba ny rafitry ny tranonkalany ary manatsara ny fikarohana fikarohana. Ny Sitemaps dia ahitana ny lisitry ny pejy Internet, ny metadata mifandray amin'izy ireo ary ny fomba nandaminana azy ireo.
Amin'ny farany, ny sary dia afaka manatsara na manohana ny ezaka SEO anao. Mba hanatsarana ny fizahantany dia mila mamantatra ny sary tsara ianao, manatsara azy ireo, mamariparitra ny sary tsara ary mamorona sitemaps mba hanatsarana ny traikefa ataon'ny mpitsidika sy hanatsara ny fikarohana nataonao.